Fahafantarana ny tena Andriamanitra II | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Mahafantatra sy miaina an Andriamanitra - izany no atao hoe fiainana! Andriamanitra dia namorona antsika hanana fifandraisana aminy. Ny votoatiny, ny votoatin'ny fiainana mandrakizay dia ny fahafantarantsika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahiny. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny programa na fomba, fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny olona iray. Rehefa mivoatra ny fifandraisana dia lasa mahatakatra sy miaina ny tena Andriamanitra isika.
Ahoana no fomba itenenan'Andriamanitra?
Andriamanitra dia miteny amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina amin'ny alàlan'ny Baiboly, ny vavaka, ny toe-javatra ary ny fiangonana mba hanambarana ny tenany, ny tanjony ary ny fombany. "Fa ny tenin 'Andriamanitra velona sy mahery ary maranitra noho ny sabatra roa lela ka manitsaka mandra-panasarany ny fanahy sy ny fanahy ary koa ny tsoka sy ny taolana ary mpitsara ny eritreritra sy ny fo." (Hebreo 4,12).
Miteny antsika tsy amin'ny alalan'ny vavaka fotsiny Andriamanitra fa amin'ny alàlan'ny Teniny ihany. Tsy azontsika ny mahatakatra ny Teniny raha tsy mampianatra antsika ny Fanahy Masina. Rehefa manatona ny Tenin 'Andriamanitra isika, dia ny mpanoratra no manatrika antsika mba hampianatra antsika. Tsy hita velively ny fahamarinana. Nambara ny fahamarinana. Rehefa nambara amintsika ny fahamarinana, dia tsy tarihina amin'ny fihaonan'Andriamanitra isika - dia fihaonany amin'Andriamanitra! Rehefa manambara fahamarinana ara-panahy avy amin'ny Tenin'Andriamanitra ny Fanahy Masina dia miditra amin'ny fiainantsika manokana izy (1 Korintiana 2,10: 15).
Ao amin'ny Soratra Masina rehetra dia hitantsika fa niresaka tamin'ny olony Andriamanitra. Rehefa niteny Andriamanitra dia mahazatra amin'ny olona tsirairay io amin'ny fomba miavaka. Miteny antsika Andriamanitra rehefa manana tanjona amin'ny fiainantsika Izy. Raha te hampiditra antsika amin'ny asany izy dia manambara ny tenany izy mba hahafahantsika mamaly amin'ny finoana.
Hatao amintsika ny sitrapon'Andriamanitra
Ny fanasan'Andriamanitra hiara-hiasa aminy dia mitarika hatrany amin'ny krizy amin'ny finoana izay mitaky finoana sy asa. «Fa Jesosy namaly azy ireo hoe: Ny Raiko miasa mandraka androany, ary Izaho koa miasa ... Ary Jesosy dia namaly azy ireo ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ny raim-pianakaviana manao; fa izay ataony dia mba manao toa izany koa ny zanaka. Fa ny ray tia ny zanaka, ary aseho azy izay rehetra ataony, ary hasehony azy ny asa lehibe kokoa aza, mba hahagaga anao (Jaona 5,17:19, 20). "
Na izany aza, ny fanasan'Andriamanitra antsika hiara-miasa aminy dia mitarika hatrany ny krizy finoana izay mitaky finoana sy ny asa ataontsika. Rehefa manasa antsika hiaraka aminy amin'ny asany Andriamanitra dia manana andraikitra izay manana endrika masina izay tsy azontsika atao samirery. Izany dia toa ny toeran'ny finoana rehefa mila manapa-kevitra ny hanaraka izay tsapantsika fa andidian'Andriamanitra hataontsika.
Ny krizim-pinoana dia toerana mampiova hevitra tsy maintsy anaovanao fanapahan-kevitra. Mila manapa-kevitra momba izay inoanao momba an'Andriamanitra ianao. Ny fomba famalianao an'izany hevitra izany no hamaritana raha manohy miroso amin'Andriamnitra ianao amin'ny endriny masina izay hany azony atao, na manohy amin'ny lalanao ianao ary manadino izay nokasain'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Io dia tsy traikefa indray mandeha - dia traikefa isan'andro. Ny fomba fiainanao dia fijoroana ho vavolombelona amin'ny zavatra inoanao an'Andriamanitra.
Ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra tokony hataontsika Kristiana dia ny fandavana ny tenantsika, ny fitondrana eo amintsika ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fanaovana izany. Ny fiainantsika dia tsy maintsy mifantoka amin 'Andriamanitra, fa tsy hifantoka amiko. Raha lasa Tompon'ny fiainantsika Jesosy dia manan-jo ho Tompon'ny toe-javatra rehetra. Mila manao fanitsiana lehibe [fanitsiana] eo amin'ny fiainantsika isika hanatevin-daharana an'Andriamanitra amin'ny asany.
Ny fankatoavana dia mitaky fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra
Miaina an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fankatoavana Azy ary eo am-panaovantsika ny asany amin'ny alalantsika. Ny teboka lehibe iray tokony hotadidina dia ny tsy ahafahanao manohy ny fiainanao toy ny mahazatra, mijanona eo amin'ny toerana misy anao ankehitriny ary miaraka amin'Andriamanitra miaraka. Ilaina hatrany ny fanavaozana ary manaraka ny fankatoavana. Ny fankatoavana dia mitaky fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra mba hiasa amin'ny alalanao. Rehefa vonona ny hanaiky ny zava-drehetra eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-Tompon'i Kristy isika dia ho hitantsika fa ny fanitsiana ataontsika dia tena mendrika ny valisoa azo avy amin'Andriamanitra. Raha tsy namoy ny fiainanao manontolo ianao tamin'ny fanjakan'i Kristy, izao no fotoana hanapahanao hevitra hanaiky ny tenanao, hitondra ny hazofijalianao, ary hanaraka azy.
«Raha tia ahy ianao, dia hitandrina ny didiko. Ary te-hangataka amin'ny Ray aho, ary homeny mpanony hafa fa hiaraka aminao mandrakizay: ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao, satria tsy mahita izany ary tsy mahalala izany. Fantatrao izy, satria mijanona ao aminao ary ho ao aminao. Tsy te-hamela anao ho kamboty aho; Manatona anao aho. Mbola kelikely kelikely izao, tsy hahita ahy intsony izao tontolo izao. Fa tokony hahita ahy ianao satria velona aho ary tokony ho velona koa ianao. Amin'izany andro izany dia ho hitanao fa ao amin'ny Raiko aho ary ianao ato amiko, ary izaho ao aminao Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy. Fa izay tia ahy no tian'ny Raiko, ary Izaho ho tia azy sy haneho ny tenako aminy " (Jaona 14,15-21).
Ny fankatoavana dia fanehoana ivelany ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Amin'ny lafiny maro, ny fankatoavana no fotoan'ny fahamarinana. Hanao izay hataontsika
asehoy izay tena inoantsika momba azy
fantaro raha miaina ny asany isika
fantaro raha afaka mahafantatra azy amin'ny fomba akaiky sy mahazatra isika
Ny valisoa lehibe amin'ny fankatoavana sy ny fitiavana dia ny hanehoana ny tenany amintsika amin'Andriamanitra. Io ny lakile misy ny fiainana an Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Rehefa mahatsapa isika fa miasa foana amintsika Andriamanitra, fa manana fifandraisany am-pitiavana Izy, dia miresaka amintsika izy ary manasa antsika hiara-miasa aminy amin'ny asany, ary vonona ny hampihatra finoana sy hanao zavatra isika Dingana amin'ny alàlan'ny fanaovana fanitsiana ho fankatoavana ny torolalany, dia hahalala an'Andriamanitra isika amin'ny alalàn'ny traikefa rehefa manao ny asany amin'ny alalantsika Izy.